Political Page ပုလဲသွယ်: လက်ပန်းတောင်းတောင်မှာ "မီးစုန်းအဖြူ မီးလောင်ဗုံး" ကို သုံးခဲ့ကြောင်း (နယူးယော့-တိုင်းမ်) သတင်းစာက ရေးသားလိုက်
လက်ပန်းတောင်းတောင်မှာ "မီးစုန်းအဖြူ မီးလောင်ဗုံး" ကို သုံးခဲ့ကြောင်း (နယူးယော့-တိုင်းမ်) သတင်းစာက ရေးသားလိုက်
လက်ပန်းတောင်းတောင်မှာ မြန်မာအာဏာပိုင်တွေက "မီးစုန်းအဖြူ မီးလောင်ဗုံး" ကို သုံးခဲ့ကြောင်း (နယူးယော့-တိုင်းမ်) သတင်းစာက ရေးသားလိုက်ပါတယ်။
၃ဝ-၁-၂ဝ၁၃၊ ဘန်ကောက်။ မြန်မာနိုင်ငံမှာ ဆန္ဒပြရဟန်းတော်များနဲ့ ရွာသားများကို ဆိုးဝါးလှတဲ့ မီးလောင်ဒဏ်ရာတွေ ရစေအောင် ဖြိုခွင်းမှုကို ရှေ့နေအစုတစုကနေ လေ့လာစူးစမ်းလေ့လာမှုပြုခဲ့ကြတာမှာ စစ်မက်ဖြစ်ပွါးချိန်မှာသာသုံးရတံ့ (ဖေါ့စ်ဖါးရစ်) အဖြူကို သုံးခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့ မှတ်ချက်ချလိုက်ပါတယ်။
ပြီးခဲ့တဲ့နိုဝင်္ဘာလထဲမှာ မြန်မာနိုင်ငံအလယ်ပိုင်းက အငြင်းပွါးဘွယ်ရာ ကြေးနီမိုင်းမှာ ဆန္ဒပြသူတွေကို အသက်အန္တရာယ် စိုးရိမ်ရလောက်အောင် ရထားတဲ့ဒဏ်ရာအနာဓါတ်ပုံကို မြင်တွေ့ရတဲ့ လူထုဟာ အံ့သြတုံလှုတ်သွားစေခဲ့တယ်။ ဒီအဖြစ်အပျက်ကနေ ၂ဝ၁၁ မှာ အာဏာရလာတဲ့ အရပ်သားသမတဦးသိန်းစိန်အစိုးရဟာလဲ စစ်အစိုးရတွေလိုဘဲ လူထုဖြိုခွင်းမှုမှာ အဲလိုဘဲ ဖိနှိပ်ရေးနည်းလမ်းတွေဘဲဆက်သုံးမှာဘဲလို့ စိုးရိမ်စိတ်တွေဖြစ်ပေါ်လာစေခဲ့ပါတယ်။
မြန်မာရှေ့နေတွေနဲ့ အမေရိကန် လူ့အခွင့်အရေးရှေ့နေတွေပူးပေါင်းပြီး ဆန္ဒပြခဲ့ရာနေရာက သက်သေခံပစ္စည်းတွေကို စုဆောင်းကြရာမှာ ရဲတွေအသုံးပြုခဲ့တာလို့ဆိုတဲ့ သတ္ထုကျည်ဆံခွံတွေလဲပါဝင်ပါတယ်။ ဒီသတ္ထုကျည်ဆံခွံတွေကို ဘန်ကောက်က ပုဂ္ဂလိကဓါတ်ခွဲခန်းမှာစစ်ဆေးမှုလုပ်တဲ့အခါ ဓါတ်ခွဲကျွမ်းကျင်သူတွေက ဒါတွေထဲမှာ (ဖေါ့စ်ဖါးရပ်စ်) မီးစုန်းတွေ အများကြီးပါနေတာကို ထုတ်ဖေါ်နိုင်ခဲ့ကြတယ်။ ဒီအစီရင်ခံစာမိတ္တူတစုံကို သတင်းထောက်တဦးက လက်ခံရရှိခဲ့ပါတယ်။ သတ္ထုကျည်ဆံခွံကိုလဲ ကြည့်ခွင့်ရခဲ့တယ်။
အထက်မြန်မာနိုင်ငံရှေ့နေများကွန်ယက် ဥပဒေရေးရာခေါင်းဆောင် ဦးသိန်းသန်းဦးက “ကျွန်တော်တို့ ဖေါ့စ်ဖါးရပ်စ်ပါတဲ့ ကျည်ဆံကို သုံးခဲ့တယ်ဆိုတာကို အခိုင်အမာပြောနိုင်ပါပြီ” လို့ ထုတ်ဖေါ်ပြောလိုက်ပါတယ်။ “ဒါဟာ လူထုကိုနောင်မှာ ဆန္ဒမပြရဲအောင် ခြောက်လှန့်လိုက်တာဘဲ။”
BANGKOK — A group of lawyers investigatingaviolent crackdown in Myanmar that left Buddhist monks and villagers with serious burns has concluded that police used white phosphorus,amunition normally reserved for warfare, to disperse protesters.
White Phosphorus has many uses in war – asasmoke screen or incendiary weapon - but is rarely if ever used by police forces.
Wai Moe contributed reporting from Yangon and Poypiti Amatatham from Bangkok.
Posted by Dr. Tint Swe at 6:30 AM